I-ThinQ, ifriji efanelekileyo ene-29 "yesikrini esivela kwi-LG | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseKorea i-LG, kude nokuma kwintengiso yefowuni, iyaqhubeka ukuya kwimarike enkulu ye-elektroniki umthengi ngeemveliso ezintsha kunye nezisemgangathweni, ezifumene itywina elibalulekileyo lokuthenjwa. Ngoku sikumhla we-CES 2018, inokuba ngenye indlela, yile ndlela i-LG ifuna ukuqhubeka ngayo nokwenza izinto ezintsha.
Iifriji ezikrelekrele bezingayi kumsaba, kwaye abasebenzisi abaninzi baya bekhetha olu hlobo lwezixhobo ukuze bandise imihla ngemihla kwaye uzive uqhagamsheleke ngakumbi (oku kunika isahluko se Mnyama Isibuko).
Sinikela, okanye kunoko i-LG iveza i-ThinQ, ifriji efanelekileyo Inesikrini esine-intshi ezingama-29 esinezixhobo zokuchukumisa. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba le paneli yama-29 is ibonakala iyacaca, ke sinokubona oko sinako ngaphakathi ngokucofa nje kwiscreen (ngokulula, masingakwenzi ukungcola). Uyakukwazi ukusebenzisa isikrini sokuchukumisa ukusebenzisa amanqaku olawulo lokutya kunye nokugcinwa kokutya.
Enkosi kwi-webOS kunye ne-Alexa yeAmazon siya kuba nakho ukwenza izitikha, izaziso malunga nemihla yokuphelelwa kwayo kunye nemeko yokutya ngokubanzi. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, ikhamera ye-panoramic ngaphakathi yeyona iya kusivumela ukuba siqwalasele kude ngefowuni yethu xa sinemveliso ekuthethwa ngayo, okanye akunjalo. Jonga kwifriji kwivenkile ukuze ubone ukuba sinayo na Coca Cola Kubonakala kunomdla kakhulu, ngokwenene. Ukongeza, ifriji ye-ThinQ iya kudibanisa nezinye izixhobo ezifanelekileyo kunye nekhaya ezibonelelwa yi-LG. Into ebalulekileyo, nangona kunjalo, asinakukuxelela, kuba AbakwaLGG ababhengezi umhla wokukhutshwa okanye ixabiso elisemthethweni, kodwa siqinisekile ukuba ayizukubiza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I zi ganeko » I-ThinQ, ifriji efanelekileyo ene-29 ″ isikrini kwi-LG
Kuya kufuneka uthenge indlu entsha ukonwabela i-TV entsha ye-Samsung ye-146-intshi
I-HTC Vive Pro, isisombululo ngakumbi sokuzibophelela kwe-HTC kwinyani yokwenyani